သင်ကယနေ့တွင်ထဲကကြိုးစားပါနိုင်သလား whitening သွားသိကောင်းစရာများ! | သွားလမ်းညွှန် Whiten ဖို့အကောင်းဆုံးလမ်းစဉ်
tagged posts "သင်ကယနေ့တွင်ထဲကကြိုးစားပါနိုင်သလား whitening သွားသိကောင်းစရာများ!"
လူအတော်များများဟာဆယ်ကျော်သက်ကဲ့သို့ဖြူအံသွားရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်ဖြစ်ကိုစတင်. သင်ကချင်တယ်ဆိုရင်ဒီအိပ်မက်ကိုအလွယ်တကူသော်လည်းအမှန်တကယ်ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်. သင်တို့သည်ထွက်ရှိအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများကိုလေ့လာသင်ယူနှင့်အကြံဉာဏ်ကောင်းအောက်ပါအားဖြင့်အဖြူအံသွားရှိသည်နိုင်. ဤနေရာတွင်တင်ပြသတင်းအချက်အလက်များသင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ whitest အံသွားပြောပြလိမ့်မည်.
ဆေးရွက်ကြီးမှပယ်ရှားနေပါ, ကော်ဖီ, နှင့်စပျစ်ရည်. ဤသူတို့သည်အသီးအသီးမှလိုက်နာကြောင်းဓာတုပစ္စည်းများပါဝင်သည်နှင့်သင့်အံသွားအရောင်ပြောင်း. သငျသညျထိုအဆိုသင်တို့၏စားသုံးမှုကိုလျှော့ချသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားပစ်ရန်ဆန္ဒရှိနေလျှင်, သငျသညျသူတို့ကိုလောင်ပြီးနောက်ထို့နောက်သင်သည်သင်၏အံသွားနိန်ရပါမည်. သွားဧရိယာမှပွန်းစားခြင်းတစ်ဦးအလင်းပေးနိုငျသောရရှိနိုင် mini ကိုလက်ညှိုးစုတ်တံယခုရှိပါတယ်. ဤရွေ့ကားသငျသညျအပြည့်အဝအချိန်နှင့်အတူတစ်သွားပွတ်တံရှိခြင်းတစ်နေရာလေးကိုအခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်စေခြင်းငှါ. အဆိုပါဖြီးရဲ့မျးတမျးသင့်ရဲ့အံသွားသန့်ရှင်းသောရရှိသွားတဲ့အဘယ်သို့သောအ.
အကြံပြုချက်! ထိုကဲ့သို့သောအနီရောင်စပျစ်ရည်ကိုအဖြစ်အချိုရည်, ကော်ဖီနှင့်ဆိုဒါရေဖန်ခွက်နှင့် တွဲဖက်. ကိုလောင်ရပါမည်. အခြို့သောအဖျော်ယမကာအံသွားအရောင်ပြောင်းရန်အလွန်လျင်မြန်များမှာ, ပုံမှန်သူတို့ကိုသောက်သုံး staining စေနိုင်ပါတယ်.
သင်အံသွားအစီအစဉ်မဆို Whiten အတွက်လုပ်သင့်ကိုပထမဦးဆုံးအရာကိုသင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စင်ကြယ်သောအရသေချာသည်. သင့်ရဲ့အံသွားပညာရှင်ပီသစွာတိုင်းခြောက်လသန့်ရှင်း Get နှင့်သင်၏လက်ရှိသန့်ရှင်းရေးအတှကျရုံးရှိနေစဉ်သင်၏နောက်ရက်ချိန်း.
သငျသညျအစာစားခြင်းသို့မဟုတ်မသောက်ရသောအခါ whitened သင့်ရဲ့အံသွားရှိခြင်းပြီးနောက်အလွန်သတိထားရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်. သူတို့ whitened ခဲ့ကြပြီးနောက်အံသွားကိုရှုတ်ချဖို့ပိုဖွယ်ရှိဖြစ်လိမ့်မည်. သင်သည်သင်၏အံသွား Whiten ပြီးနောက်မှောင်မိုက်အရောင်ရှိသည်သောအစားအစာများ၏ရှင်းလင်းသောခုတ်မောင်းဖို့ကြိုးစားပါ. ကော်ဖီ, ဥပမာအားဖြင့်, သင့်ရဲ့အံသွားဖို့ဖြစ်ပေါ်နိုင်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုတစ်အလားအလာအစွန်းအထင်းဖြစ်စေတဲ့အဖျော်ယမကာများဟာစံနမူနာကောငျးဖြစ်ပါသည်.
အကြံပြုချက်! သဘာဝအံသွား Whiten အဖြစ်စတော်ဘယ်ရီကိုသုံးပါ. စတော်ဘယ်ရီမှာတွေ့ရတဲ့သဘာဝဒြပ်ပေါင်းများဓာတုပစ္စည်းများ အသုံးပြု. မပါဘဲအံသွား Whiten လိမ့်မည်.
သင်၏သွား whitening ထုတ်ကုန်တစ်ခု sensitivity ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေခြင်းငှါ. ဒါဟာအစဉ်အမြဲမနာစေခြင်းငှါ,, ဒါပေမယ့်ဆဲတာနှိပ်စက်တာ. ထုတ်ကုန်သုံးပြီးရပ်တန့်ပါနဲ့တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးသင့်ရဲ့သွားဆရာမြင်သွား. သူကအဲဒီနည်းနဲ့သင့်ရဲ့အံသွားဖြစ်ပေါ်လာအောင်မည်မဟုတ်ကြောင်းထုတ်ကုန်အမျိုးအစားအကြံပြုပါသည်နိုင်.
အကြံပြုချက်! လုံးဝကုသမှုမစတင်မီအိမ်မှာ Whiten ထုတ်ကုန်များ၏လမ်းညွန်ကိုဖတ်ပါ. ဤသို့ပြုရုံသွားဖုံးရောင်ဖြစ်စေမည်, ခံတွင်းစိတ်ဆိုးစေခြင်းငှါ, နှင့်သင့်အံသွားပျက်စီးခံရဖို့.
သစ်သီးများအံသွား Whiten Whiten ဖို့အလွန်ကြီးစွာသောနှင့်သဘာဝနည်းလမ်း. အံသွား Whiten နိုငျသောမြတ်သောအသီးတစ်စုံတွဲဥပမာလိမ္မော်သီးနှင့်လိမ္မော်သီးများမှာ. သင်တို့သည်လည်းသင့်ရဲ့အံသွားရဲ့မျက်နှာပြင်ဆန့်ကျင်သည့်လိမ္မော်ရောင်အခွံကိုသုံးနိုင်.
Mouthwash သင့်ရဲ့အသက်ရှု freshens နှင့် gingivitis စေနိုငျသောပိုးမွှားဦးသေဆုံး; သို့သော်, mouthwash အချို့ကိုပုံစံများကိုသင့်အံသွားအရောင်ပြောင်းနိုင်. ကြမ်းတမ်းမဟုတ်ကြောင်းတစ် mouthwash ကိုအသုံးပြုပါကတောက်ပအရောင်မဟုတ်ပါဘူးသေချာအောင်.
အကြံပြုချက်! သင့်ရဲ့အံသွားနည်းနည်း Whiten မှတစ်ဦးကအံ့သြစရာလမ်းကသဘာဝစတော်ဘယ်ရီသုံးပြီးတဆင့်ဖြစ်ပါတယ်. လူတွေကနှစ်ပေါင်းများစွာတစ်အိမ်မှာ Whiten အဖြစ်စတော်ဘယ်ရီအသုံးပြုခဲ့ကြ.
ပုံမှန်သွားတိုက်ဆေးနှင့် whitening သွားတိုက်ဆေးအများကြီးကွာခြားကြပါဘူး. အလုပ်လုပ်မစျေးကြီးထုတ်ကုန်များအတွက်ကျသွားရှောင်ကြဉ်ပါ. သငျသညျရိုးရိုးကွာပိုက်ဆံ tossing လိမ့်မည်.
သငျသညျအခြို့ပါအောက်ဆိုဒ်နှင့်မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါနှင့်အတူသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် whitening သွားတိုက်ဆေးကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်. ဒီငါးပိနိန်မီကငါးဆယ်မိနစ်အဘို့သင့်အံသွား၏သေးငယ်သောအပေါက်မျက်နှာပြင်ကိုထိုးဖောက်ဖို့ Allow. ကြမ်းတမ်းစွာသင့်ရဲ့အံသွားတိုက်မနေပါနဲ့, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့သွားဖုံးကိုစိတျဆိုးမှာလက်ရှိလိမ့်မည်.
အကြံပြုချက်! သတိထားပါနှင့်အတိအကျ Direction အဖြစ်ထုတ်ကုန် whitening အံသွားကိုသုံး. ထုတ်ကုန် whitening အံသွားသွားကြွေလွှာအပေါ်တစ်ဦးတဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီးသို့မဟုတ်ထိခိုက်သက်ရောက်မှုများရှိနိုင်ပါသည်, သွားဖုံးနှင့်ပင်အာရုံကြော.
ဖြူအံသွားအဖြူတည်နေရတလမ်းတည်းဖြင့်ပုံမှန်သွားသန့်ရှင်းရေးကို set up ဖို့ဖြစ်ပါတယ်.
သင့်ရဲ့အပြုံးတောက်ပစေတယ်မှတစ်ဦးအဆင်ပြေလမ်းရိုးရှင်းစွာတစ်ဦး whitening သွားတိုက်ဆေးနှင့်အတူသင်၏လက်ရှိသွားတိုက်ဆေးကိုအစားထိုးဖို့ဖြစ်ပါတယ်. ဒါကြောင့် whitens အဖြစ်ဤသသွားတိုက်ဆေးကိုအထူးအစွန်းအထင်းများနှင့် plaque ကိုဖယ်ရှားရေးဆွဲပြီးဖြစ်ပါတယ်. အချိန်ရဲ့တိုးချဲ့ကာလကိုကျော်, သငျသညျလည်းဖြူအံသွားနှင့်လျှော့ချအစွန်းအထင်းမြင်ရကြလိမ့်မည်.
အကြံပြုချက်! သရဖူသင့်ရဲ့သဘာဝကအံသွားထက်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းဥစ္စာဖြစ်ကြောင်းကိုသတိရပါ, အံ Whiten တုံ့ပြန်ကြပါဘူး. သငျသညျပြုံးတဲ့အခါသင့်ရဲ့သရဖူမြင်နိုင်ပါသည်လျှင်သင့်အံသွား whitening တစ်ဦးမညီမညာဖြစ်နေသောအရောင်တင်ဆက်မှုစေနိုင်ပါတယ်.
သူတို့ကိုသင်အဖြူအံသွားဖြစ်လိုလျှင်အံသွား-အစွန်းအထင်းအဖျော်ယမကာကိုရှောင်ပါ. ဤအဖျော်ယမကာတချို့ကဥပမာကော်ဖီပါဝင်, ကော်ဖီနှင့်အစဉ်အလာရိုးရာလက်ဖက်. သငျသညျသငျသညျဤအမသောက်အဖြစ်အစွန်းအထင်းကိုရှောင်ကြဉ်ဖို့လိုပါလျှင်, အစွန်းအထင်း minimize ရန်သင့်အဖျော်ယမကာများ sips အကြားရေသောက်ရင်းစဉ်းစားပါ.
ကုသမှုနာကျင်မှုသို့မဟုတ် sensitivity ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်လျှင်သင့်အံသွား whitening ရပ်တန့်ပါ. ထုတ်ကုန် whitening တခါတရံ sensitivity ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ရောင်ရမ်းစေနိုင်ပါတယ်. ဒီဖြစ်ပျက်ခဲ့လျှင်, ချက်ချင်း Whiten သုံးပြီးရပ်တန့်, နှင့်ထိခိုက်မခံတဲ့အံသွားဘို့အသင့်လျော်ပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောထုတ်ကုန်နှင့် ပတ်သက်. သင့်ရဲ့သွားဆရာစကားပြော.
အကြံပြုချက်! ရေနှင့်အစွန်းအထင်းစေ Chase အချိုရည်. သငျသညျမှောငျမိုကျအရည်ပြီးနောက်အချို့သောရေလာတဲ့အခါ (ကော်ဖီ, လက်ဖက်ရည်, ပေါ့ပ်, စသည်တို့ကို.
လျင်မြန်စွာသင့်ရဲ့အံသွားတောက်ပစေတယ်သို့မဟုတ်လည်းဖြူအံသွား၏အသွင်အပြင်ရှိသည်ဖို့ပန်းသီးတစ်လုံးစားပါ. crunchy အစားအစာများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များသင်တို့၏ကြွေအပေါ်အများကြီးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုရန်မလိုဘဲသင့်ရဲ့အံသွားသန့်ရှင်းရေးကိုကူညီနိုင်သည့်ပွန်းစားခြင်းအရည်အသွေးကများ.
သင့်ရဲ့အံသွား Whiten ကိုကူညီအိမ်မှာအသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်နိုငျသောလိမ်းဆေးအဘို့သင့်သွားဆရာဝန်ကိုမေး. ဤနည်းလမ်းကိုလိမ်းဆေးနှင့်ပြည့်စုံသောအာဘော်၏ပြင်ဆင်မှုကပါဝငျ. သငျသညျနှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုပတ်ညတိုင်းအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအခြို့သောငွေပမာဏကြောင့်ဝတ်ဆင်. သင်၏သွားဒီချဉ်းကပ်နည်းကို အသုံးပြု. အဖြစ်တာရှစ်အဖြစ်အရိပ်လည်းဖြူမရစေခြင်းငှါ.
အကြံပြုချက်! သွားဆရာဝန်လညျပတျလည်းဖြူအံသွားရတဲ့ဖို့မရှိမဖြစ်များမှာ. သင်၏အသက်တာသို့စီစဉ်ထားသည်စင်ကြယ်တည်ဆောက်ခြင်းလည်းဖြူသွားနှင့်ကိုက်ခဲသော့ချက်.
မည်သည့် Whiten ကုသမှုသုံးပြီးရပ်တန့်သင့်အံသွားအတွက် sensitivity ကိုခံစားရလျှင်အထိခိုက်မခံဖြစ်လာ. သင်သည်သင်၏သွားနှင့်ကိုက်ခဲအမှန်တကယ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ကြောင်းကတည်းကသင်သည်သင်၏သွားဆရာဝန်၏အကြံပေးချက်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်. သငျသညျကအံသွား Whiten မှကြွလာသောအခါရွေးချယ်မှုများသင်တို့အဘို့အအကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းအဘယျသို့ထွက်တွက်ဆရန်သင့်သွားဆရာဝန်နှင့်အတူစကားပြောသင့်တယ်.
သင့်ရဲ့အံသွားနေ့စဉ်နိန်ကျန်းမာတဲ့သူတို့ကိုစောင့်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်, နှင့်အခေါင်းပေါက်ဆန့်ကျင်သူတို့အားကာကွယ်, နှင့်ရီဖိုင်းအစွန်းအထင်း. တစ်ဦး Whiten သွားတိုက်ဆေးကိုသုံးပြီးသင့်ရဲ့အံသွား၏အသွင်အပြင်တိုးတက်လာဖို့အလွန်ကြီးစွာသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်. များစွာသောရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်, ထို့ကြောင့်အချို့သောသုတေသနပြုမှုပြုပါ, ထိုသို့သင်သည်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုများအတွက်အကောင်းဆုံး Whiten သွားတိုက်ဆေးကိုကူညီရှာဖွေပါလိမ့်မယ်.
အကြံပြုချက်! သင်သည်သင်၏အသက်ရှုအကြောင်းပိုမိုယုံကြည်မှုလျှင်သင်သည်သင်၏အပြုံးအကြောင်းကိုပိုပြီးယုံကြည်စိတ်ချဖြစ်လိမ့်မယ်. သင့်ရဲ့လက်ဖဝါးကျွေးတော့မယ်ဆိုတဲ့ (ပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့လက်ကိုဆေး!) သင့်ရဲ့အသက်ရှုမကောင်းဘူးသို့မဟုတ်မလျှင်သင်ပြောပြနိုင်.
သငျသညျကွီးစှာသော smile.Food နှင့်အချိုရည်ရှိပါကသင့်ရဲ့အံသွားပေါ်တည်ဆောက်နှင့်အချို့သောအချိန်ပြီးနောက်သူတို့ကိုအရောင်ပြောင်းသို့မဟုတ်ရှုတ်ချနိုင်ပါတယ်မှန်မှန်သင့်ရဲ့အံသွားတိုက်. သငျသညျပုံမှန်အစည်းအဝေးပုံမှန်အံသွား-နိန်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမယ်ဆိုရင်သင့်ရဲ့အံသွားအရောင်ပြောင်းနှင့်အတူသက်ဆိုင်ရာမည်မဟုတ်ပါ.
ပုံမှန်ပေါ်တွင်သင်၏အံသွားမဝင်၏အရေးပါမှုကိုသတိရပါ. FLOSS သင့်ရဲ့အံသွားအတွင်းမှာအပျက်အစီးရရှိသွားတဲ့နှင့် plaque တိုက်, သောအရောင်ပြောင်းဖြစ်ပေါ်စေသည်. သငျသညျတိုင်းအစာစားပြီးနောက်သင့်ရဲ့အံသွားတဲ့ FLOSS ပေးသင့်; ကြားရှင်းကြိုးကိုသင်အိမ်ကနေမှစားတဲ့အခါမှာသင်နှင့်အတူကသယ်နိုငျသောလုံလောက်စွာခရီးဆောင်ဖြစ်ပါသည်. သငျသညျတညဉျ့မှာအိပ်သွားခင်မှာ, သငျသညျအကုန်လုံးဘက်တီးရီးယားဖယ်ရှားပစ်ရနိုင်အောင်သင်၏နှုတ်၌ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်အံ့သောငှါသင်တို့၏အံသွား FLOSS ရန်အလွန်အရေးကြီးသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်.
အကြံပြုချက်! ကော်ဖီရှောင်ကြဉ်ပါ, လက်ဖက်ရည်, သူတို့ရဲ့ whitest သင့်ရဲ့အံသွားစောင့်ရှောက်ဖို့ Cola နှင့်အခြားမှောင်မိုက်ရောင်စုံအချိုရည်. ဤအဖျော်ယမကာအသီးအသီးကိုသင့်အံသွားအရောင်ပြောင်းဖြစ်လာစေမည်.
သင်သည်သင်၏အံသွား whitened တယ်ပြီးနောက်ရက်အနည်းငယ်အဘို့ကိုသာရှင်းရှင်းလင်းလင်းအဖျော်ယမကာမသောက်ရ.
အချိုရည်အပေါ်ခုတ်လှဲ, ထိုကဲ့သို့သောဆိုဒါပါ pop သို့မဟုတ်စပျစ်ရည်ကိုအဖြစ်, သငျသညျလည်းဖြူအံသွားပြီကူညီပေးပါမည်. ဆော်ဒါနှင့်စပျစ်ရည်ကိုသင့်ရဲ့အံသွားကိုရှုတ်ချနိုငျသောကွောငျ့, သငျသညျနှစ်ဦးစလုံး၏လျော့နည်းသောက်သုံးခြင်းဖြင့်အဖြူရောင်အပြုံးကာကှယျပေးနိုငျ. သူတို့ကိုသင်ရှိရမည် အကယ်., သော်လည်း, သူတို့ကိုစားသုံးပြီးနောက်တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးသင့်ရဲ့အံသွားတိုက်. ထိုသူတို့ကိုလည်းဆိုးဆိုးရွားရွားကိုအံသွားကိုရှုတ်ချဖို့နည်းနည်းအချိန်ကိုငါပေးမည်.
အကြံပြုချက်! သင့်ရဲ့အံသွားလည်းဖြူရဖို့, သင်တစ်ဦး walnut ပင်မှအသီးအခေါက်ကိုသုံးနိုင်သည်. သင့်ရဲ့အံသွားပေါ်မှာဤပွတ်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်သူတို့ကိုသန့်ရှင်းရေးနှင့်သူတို့ကိုလည်းဖြူစေသည်.
နို့ထွက်အစားအစာများ၏ပိုကြီးပမာဏစားသုံး. နို့ထွက်ပစ္စည်းထုတ်ကုန်သတ္တုဓာတ်များ, ထိုကဲ့သို့သောကယ်လစီယမ်အဖြစ်, ကကျန်းကျန်းမာမာရှာဖွေနေသင့်ရဲ့အံသွားစောင့်ရှောက်မည်. သင့်ရဲ့အံသွား၏ကြွေအရောင်ပြောင်းဖို့အားကောင်းနှင့်လျော့နည်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ဖြစ်လာလိမ့်မည်. သင်သည်သင်၏အစားအသောက်များတွင်သို့, ဤအစားအစာအမျိုးအစားများပါဝင်သည်အခါသင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်းဖြူပြုံးပေးပါ.
အကြံပြုချက်! သူတို့ကို Whiten ရန်မုန့်ဖုတ်ဆော်ဒါနှင့်ပါအောက်ဆိုဒ်ငါးပိနှင့်သင်၏အံသွားတိုက်. နှစ်ဦးစလုံးပါဝင်ပစ္စည်းများလေ့သွားတိုက်ဆေး whitening အတွက်အသုံးပြုကြသည်, နှင့်လူအများစုကသူတို့နေအိမ်များမှာသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်စေ.
သင့်ရဲ့အံသွားဘို့သဘာဝ scrubber အဖြစ်ပြုမူနိုငျသော fibrous texture ဖြစ်ကြောင်းဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်အသီးကိုစား. ပန်းသီးပါဝင်စဉ်းစားရန်အစားအစာများ၏အနည်းငယ်ဥပမာ, ပန်းသီး, သခွားသီးနဲ့မုန်လာဥနီ. အများဆုံးအကျိုးသက်ရောက်ရဖို့ crunchy အစားအစာကိုတက်ဝါးဖို့အားလုံးကိုသင့်ရဲ့အံသွားကိုသုံးပါ.
သင်ကကူညီနိုင်မယ်ဆိုရင်ဆေးပြင်းလိပ်သို့မဟုတ်စီးကရက်ဆေးလိပ်မနေပါနဲ့. ဤရွေ့ကားနှစ်ခုစလုံးအံသွားတစ်အရောင်ပြောင်းစေလူသိများကြသည်. ဆေးလိပ်ဖြတ်အံသွား၏အဝါရောင်တားဆီးကူညီပေးပါမည်. ထိထိရောက်ရောက်သင်ဆရာဝန်တစ်ဦးမှသွားလျှင်သင်ဆေးလိပ်ဖြတ်ကူညီနိုငျသောဆေးဝါးများရှိပါတယ်. သင်ကသင့်လျော်သောအကြံဥာဏ်နှင့်ထောက်ခံမှုရှိရမည်.
လူအများစုဟာသူတို့လည်းဖြူအံသွားတာပေါ့ဆန္ဒရှိ. အဆိုပါပြဿနာကိုလူအများစုကသူတို့အံသွား Whiten နိုငျကွောငျးမယုံကြည်ကြဘူးဆိုတာပါပဲ, ဒါကြောင့်သူတို့ကပင်ကြိုးစားကြည့်ပါဘယ်တော့မှ. အောက်ပါဤဆောင်းပါးကိုထံမှအကြံပေးချက်များနှင့်လှည့်ကွက်အနည်းငယ်သာအချိန်အတွက်လှပအဖြူအံသွားသင်အားငါပေးမည်.
Whiten သွားလမ်းညွှန် Posted by ကို - ဇွန်လ 5, 2016 12 မှာ:59 နံနက်
categories: Whiten သွားဖို့အခြေခံပြီးမူလစာမျက်နှာ Tags:: အဖြူအံသွား, whitening သွားသိကောင်းစရာများ, သင်ကယနေ့တွင်ထဲကကြိုးစားပါနိုင်သလား whitening သွားသိကောင်းစရာများ!